Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka ụlọ ọrụ ọkachamara ọkachamara?
Ọ dịtụla mgbe ị na-eche ihe otu ụlọ ọrụ nyochacha njirimara na-eme? N'oge a, ọrụ ọkachamara SEO na-ebuli ọtụtụ ajụjụ ebe ọ bụ na ndị ọkachamara a na-eme ọtụtụ ọrụ dị mgbagwoju anya nke na-enyere aka ịkwado ụlọ ọrụ weebụ gị n'elu SERP. Iji ghọta ihe anyị kwesịrị ịtụ anya n'aka ụlọ ọrụ njikarịcha, anyị kwesịrị ịbịa n'azụ ebe ahụ. N'isiokwu a, m ga-enye gị nghọta na nyocha njikwa search engine ma gosipụta ihe SEO ọkachamara mere iji melite ndị ahịa ha.
Achọrọ m ịmalite isiokwu a site n'igosi na e nwere ụzọ isi okporo ụzọ anọ: organic (search), Ntuziaka, ụgwọ na mmekọrịta. Otú ọ dị, azụmahịa okporo ụzọ bụ okporo ụzọ kachasị ezubere iche. Ọ pụtara na ịnweta okporo ụzọ ị na-enweta site n'ịchọta ọchụchọ maka isiokwu gị niche dị mkpa, ohere ka ukwuu iji mee ka nleta ndị a gaa ahịa na ego ha nwetara.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ngwaahịa ọ bụla, ma ịchọrọ ịkwalite ya na ntanetị. Ị họọrọ ngalaba aha ma gogoro ndị mmepe weebụ ọkachamara ga-ewu ụlọ ọrụ weebụ ma ọ bụ ibute peeji maka gị. E meela ka saịtị gị. Otú ọ dị, n'ezie, ị gaghị enweta okporo ụzọ na mpaghara gị n'otu oge. Ị malitere ịjụ onwe gị ajụjụ ndị a: "Ònye maara ma e wezụga m na iwu m na m webatara mkpokọta weebụ?", "Ndi ndị ọrụ maara ihe gbasara akara m?" Na "Olee otú m nwere ike isi meziwanye mmasị m ma na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa ebe m webata? ".
Ajụjụ ndị a niile nwere ike ịza site na ezigbo onye ọrụ SEO ma ọ bụ ọkachamara njikarịcha. Ya mere, nzo nke ozo mgbe ntinye akwukwo webata bu njikorita oru ntaneti di ka usoro ihe omumu nile. Ọ bụrụ na ị kpebie imepe ahịa gị ka ọ bịa ma bulie ọnụego ntọghata gị, mgbe ahụ, ịkwesịrị ịme ụlọ ọrụ nwere njikarịcha. Otu ndị ọkachamara ga-eduzi gị n'ụzọ ị ga-aga nke ọma.
Olee ụlọ ọrụ kachasị mma?
Ụlọ ọrụ SEO nwere ụzọ dị iche iche maka ọrụ ọ bụla ha na-arụ. Tupu ịmalite mgbasa ozi kachasị mma, ha na-emekarị nyocha niche nyocha na onye na-asọ asọmpi. Nbịakwute otu ọrụ n'ịntanetị ga-adaberekwa n'ogologo mkpọsa ahụ, nchịkwa ahịa, mmefu ego, na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa.
Nke mbụ, ụlọ ọrụ kachasị mma na-eme nyocha nke usoro saịtị. Google na ụlọ ọrụ ọchụchọ ndị ọzọ dịka Yahoo na Bing na-ekwusi ike na ha na-ebuli saịtị ndị ka mma maka ndị ọrụ kama ịchọpụta engines ọchụchọ. O doro anya na ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịhazi nke ọma ma dị mfe ịnweta. Otú ọ dị, ọ ghakwara ịhazi nke ọma maka engines ọchụchọ iji kpaa ọdịnaya gị.
Ya mere, ndị ọkachamara SEO na-enye usoro ndị a iji melite njikwa saịtị gị:
dozie njehie saịtị;
mejuputa Robots. faịlụ txt;
meziwanye ọnọdụ ndekota gị;
mejuputa atumatu nke XML;
meziwanye ọsọsọ gị;
na-ebuli ihe atọ.
Usoro ọzọ nke njikarịcha weebụsaịtị bụ nyocha ọdịnaya. N'akụkụ a, ndị ọkachamara SEO na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ahịa azụmahịa iji mepụta ọdịnaya pụrụ iche ma dị mkpa. Ọzọkwa, ha na-enyocha ọdịnaya ị nwere na saịtị gị ma melite ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọzọkwa, ndị ọkachamara SEO na-edozi ihe ndị dị ka mbipụta abụọ, akwụkwọ ndị na-efu, na akwụkwọ dara ogbenye Source .